China kuChile-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Mutsetse Webasa>Maodzanyemba America Line>China kuChile
Kutumira kubva kuChina kuenda kuChile
Vazhinji vevatengi vedu vakavakirwa muChile, saka wave musika wakakosha kwazvo kwatiri. Takasaina kontrakiti mitengo nevatakuri vakaita seCOSCO, OOCL, APL, EMC, MSK, uye HMM. Hukama uhwu ngatipei iwe yakanaka kwazvo mitero yekutakura kana uchitakura kubva kuChina kuenda kune chero chiteshi kuChile.
Iine SHL sevadyidzani, kutumira zvinhu kubva kuChina kuenda kuChile zvichave nyore, iwe unongoda kusiya zvinhu zvako nesu, uye isu tichaita zvimwe zvese. SHL inovavarira kuve yako yakanakisa yekutakura zvinhu kubva kuChina kuenda kuChile. Kumbira mutengo uri nani izvozvi.
Ro-Ro / Break Bulk Kutakura kubva kuChina kuenda kuChile
SHL inogona kupa RORO ROROMAFI BREAKBULK yezvakanaka michina, mota nemidziyo inorema kubva kuChina kuenda kuChile Tinogona kupa imwechete yekumira uye yakagadzirirwa mhinduro.
Kutakura Gungwa Kutakura kubva kuChina kuenda kuChile
Tinogona kupa anokwikwidza egungwa mitoro mitero, uye akanakisa ekutumira mhinduro, zvinoenderana neyako inodiwa yekufambisa nguva kana kutumira kubva kuChina kuenda kuchiteshi muChile (kunyanya kune inland ports).
Kutakura Ndege Kubva kuChina kuenda kuChile
Isu tichasarudza inonzwisisika ndege yendege yako yekutumira zvinoenderana nenguva yako zvaunoda. Bansar ndiyo yako yepamusoro yekutakura mhinduro mhinduro yekutakura nendege kubva kuChina kuenda kuChile.
Kutakurirwa zvakachipa kubva kuChina kuenda kuChile
Izvi zvinoenderana nekuti zvinhu zvingani zvaunotumira kubva kuChina kuenda kuChile, kana ukasamhanyisa nesampuro diki kwazvo, unogona kushandisa China Post kana kutaura seDHL, kana uine zvinhu zvakawanda, ipapo bata Bansar, iwe unowana kwedu kwakanyanya kutumira chiyero kubva kuChina kusvika kuChile.
Yakareba Sei / Yakawanda Sei Kutumira kubva kuChina kuenda kuChile
Suo neDhipatimendi Kutakura kubva kuChina kuenda kuChile
Kunyangwe nezvezvido zvemunhu kana zvebhizinesi, isu tinogona kukupa musuwo kutakura sevhisi sevhisi yako, iyo inosanganisira kubvumidzwa kwetsika muChile.
Yako Yakanakisa Kutakura Yekutakura kubva kuChina kuenda kuChile
Ipa anokwikwidza egungwa uye nendege mitero kubva kuChina kuenda kuChile
Kubva kuSeaport kuChina
Nguva yekutumira (mazuva)
Main Ndege muChile
Chamonate Airport Maquehue Airport
Teniente Vidal Airport Aerodromo Rodelillo Airport
Balmaceda- Airport Aerodromo Rodelillo Airport
Cerro Moreno International Airport Diego Aracena International Airport
La Florida Airport Carriel Sur International Airport
Chacalluta International Airport Chacalluta Aerldromo Las Marias Airport
El Tepual International Airport Canal Bajo Carlos Hott Siebert Airport
Pdte. carlos Ibanez del Campo Airport Comodoro Arturo Merino Benitez International Airport
Ndingaite sei ini yekuwana mutero wekunze wechigadzirwa changu?
Iyo webhusaiti yeCBP https://www.cbp.gov/ ine ruzivo rwakawanda maererano neChile tsika nemabasa.
Kuti uwane zvigadzirwa zvako zvinounza mutero wemitero, iwe unofanirwa kutanga watanga HS code yayo.
Yako tsika broker inogona kukubatsira neizvi.
Iwe unobva washandisa kodhi iyi pane yakapihwa mutero yedheti kuti uone kuti yakapi mari yakashandiswa kune zvigadzirwa zvako.
Ini ndinofanira kubhadhara inishuwarenzi yezvinhu zvangu kubva kuChina?
Kana iwe uri kutumira pane CIF mazwi, iwe hauzobhadhara iyo inishuwarenzi.
Izvi zvinodaro nekuti CIF inovhara iyo inishuwarenzi zvishoma zvekutakura.
Ndosaka zvichinzi 'mutengo weinishuwarenzi mutakura.'
Zvakawanda seCIF inosanganisira inishuwarenzi yezvinhu, mazwi einishuwarenzi aya anosiyana nemakambani akasiyana ekutakura.
Nekudaro, kana semuenzaniso, ukarega mutengesi wako abata kutumira, iwe unoshaya kutonga kuti ndeipi nzira yekutumira yavanosarudza.
Ivo vanogona kusarudza kusarudza yakachipa nzira, iyo zvakare, iwe hauna simba pamusoro.
Kuti uve parutivi rwakachengeteka, zviri nani kana ukabatana neyavo yekutakura zvinhu kuChina kuti uzive izvo inishuwarenzi inovhara.
Ini ndinofanira kubhadhara chero mabasa uye emitero kuChina?
Iwe haufanire kubhadhara chero mutero muChina.
Iko kubhadharisa iwe kwaunopinza ndiyo mari yekutakura kuenda kuchiteshi chekutakura muChina.
Zvakare, iwe uchafanirwa kuchengetera izvo zvinodhura zvinyorwa muChina.
Ziva kuti zvese izvi zvirevo zvinosanganisirwa mune chero incoterm yakapihwa muChina.
Kubva kuFOB kune zvese zvimwe. Saka iwe haungatombonetseka pamusoro pavo.
Kunze kwekunge zvakadaro, iwe unogadzira zvinhu zvako pane EXW mazwi.